Isixhobo seNkxaso ye-Knee-Abavelisi beenkxaso kwi-China Knee, abaXhasi
Idolo kulula ukulimala ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kwaye amathambo alungelelaniswe lula ngokobudala, ke idolo kufuneka likhuselwe. Umkhuseli wedolo we-silicone ufudumeza idolo ngokudibanisa kunye nokukhuthaza ukuhamba kwegazi; umsesane we-silicone esonga i-360 ° ngeenxa zonke kumadolo edolo ukubonelela ngenkxaso epheleleyo yokudibana kwedolo; umkhuseli wedolo akukho lula ukushukumisa.
Ibhanti ye patella luhlobo lokukhusela ezemidlalo kwidolo elidibeneyo. Umthamo awukho mkhulu njengenkxaso yamadolo, kwaye uguquguqukayo ukunxiba. Umsebenzi ophambili webhanti ye-patella kukukhusela i-patellar ligament, ukuzinza i-patella, ukunciphisa ukunxiba kwe-meniscus, kunye nokuba nefuthe elihle lokuzikhusela kwindibaniselwano. Intlungu ebangelweyo ineziphumo ezilungileyo zokukhululeka.
Umkhono wamadolo wenylon uyaphefumla kodwa ubonelela ngoxinzelelo olulungileyo ngaxeshanye, kwaye uyilo lomxokelelwane lukwakhona ukuze ufumane inkxaso engcono. Nokuba ngumthambo oqinileyo, ukuhamba, ukuhamba ngeenyawo, ukubaleka, ezemidlalo okanye njengentlungu ngokubanzi edolweni, ukunxiba lo mkhuselo wedolo kuyakukhusela idolo lakho ekonzakaleni okanye kwintlungu yokuncama ukuze ukonwabele ukutshintsha okanye ukudibana ngokudibeneyo.
Inkxaso yamadolo e-foam
Izixhobo ezinobunzima kunye nezicekeceke, ezemidlalo ezinokuphefumla eziwumdaka, zikhululekile ukunxiba, zilungele imidlalo ekhuthazayo enje ngebhasikithi, kwangaxeshanye ikwanenkxaso elungileyo kunye nokusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokulwa nokungqubana, kulula nokunxiba, kulula ukunxiba, hayi amanyathelo ongezelelweyo, okuqaqamba kunye nelaphu kunye nokuncamathela okugqwesileyo, ikwacacisa ijika lomlenze kakuhle, nekuthandeka kokubini.
7mm umkhono wedolo
Umkhono wamadolo we-7mm esivelisayo wenziwe nge-neoprene kunye ne-nylon, izinto zokuphefumla kunye neziphezulu eziphezulu zingakunika uxinzelelo olulungileyo kwaye lunike inkxaso kwidolo lakho. Sinokwenza ngokwezifiso umbala kunye nobungakanani bakho, kwaye uphawu olwenzelwe oko luyamkelwa. Lo mkhono wedolo usetyenziselwa ukukhuselwa kwezemidlalo, kwaye uyafumaneka kubantu abadala nakubantwana.
Nxiba le nkxaso yeedolo ezixhonyiweyo uqinisekisa ukuba idolo aliyi kwenzakala lula. Ukuba ayinxibanga emva kokonzakala, inokunciphisa ukugoba kweedolo ukukhusela idolo elidibeneyo. Inomdibaniso ofanelekileyo womgangatho, uxinano kunye nobukhulu bezinto ezinqabileyo ze-neoprene zifunxa umsebenzi onefuthe eliphezulu kwaye ukuziva kungengobunkunkqele kuyayivumela intsingiselo ehambelana ngokupheleleyo nokuhamba!
I-bamboo charcoal knee brace
I-bamboo charcoal knee brace yimveliso eyenziwe ngendwangu equkethe i-bamboo charcoal fiber. Ukuqulunqwa kwayo kukwaqulathe isilika ye-latex, umsonto wekotoni, ispandex, njl njl. Olona khetho lukhethayo lokufunxa umswakama kunye nokukhusela ukubanda ukukhusela idolo ngokudibeneyo.